Denim tamin'ny laser manasa sokitra - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Denim tamin'ny laser manasa sokitra
Denim Laser Washing sokitra Solutions
Jeans / T-Shirt / Clothing / Mipalitao / Corduroy
Inona no fanasan sokitra tamin'ny laser atao?
Denim Individualized sokitra / Whisker / Monkey Wash / Gradient / nandrovitra / vonona-to-hanao 3D famoronana sokitra
Ny teknolojia fanavaozana ny denim manasa orinasa - denim tamin'ny laser sokitra , izao dia lasa ny mahazatra teknolojia tany Eoropa.
Denim manasa tamin'ny laser rafitra dizitaly sy ny fomba mandeha ho azy fanodinana. Mety tsy tonga saina tanana borosy, whisker, gidro Mandroa, nandrovitra amin'ny nentim-paharazana dingana famokarana, fa koa mampiasa tamin'ny laser mba etch tsipika, voninkazo, miatrika, taratasy sy tarehimarika, mampiseho famoronana vokany. Mety tsy tonga saina batch fanodinana ny fanasan dingana, fa hitsena ny tsena ihany koa ny fironana manokana customization kely batch.
Nentim-paharazana Hand brush
Milina iray misolo mpiasa dimy. Ny milina dia mandeha ho azy sy mahomby tanteraka.
Hanafohezany ny dingana
Ny dingana sarotra isan-karazany, toy ny whisker, 3D whisker, gidro Mandroa, gradient, nandrovitra, ary ny mamorona teti-dratsiny, tamin'ny laser fotsiny mba hahazoana mora foana.
Ny hamaly haingana ireo vokatra vaovao ny fampandrosoana, sy ny fironana dia maso ara-potoana.
Boky fampianarana nentim-paharazana ny asa, tsara dia sarotra ny mifehy. Ny sokitra vita tamin'ny laser vokatra manana fiantraikany tena tsy tapaka, araka ny marina sy mafy orina tsara.
Low fandidiana ny vola lany
Eoropa teknolojia, miovaova sy azo antoka, kely dia kely fikojakojana vola, ihany no mila 7 kWh isan'ora.
Golden tamin'ny laser - Laser fanasan sokitra rafitra no safidy tsara indrindra mba hampitombo ny tombom-barotra ny denim lamba vokatra.
Energy famonjena sy ny tontolo iainana
Nentim-paharazana handevona dingana be dia be simika reagents, ary maro Nanasa ny mahatonga ny fako ny rano, ary ny maloto dia afaka manimba ny tontolo iainana. Laser fanasan'ny no mamarana ny isan-karazany vokatry ny pataloha jeans amin'ny fomba tsotra indrindra, fanatsarana ny tontolo iainana miasa, angovo mamonjy sy fiarovana ny tontolo iainana.
Laser fanasana Mitambatra ny sasany fomba nentim-paharazana tsy manam-paharoa hamorona avo-Boutique denim farany.
Laser manasa rafitra sokitra tsy vitan'ny hoe mitondra ny denim fanodinana orinasa, fa mihoatra noho ny fahalalana ihany koa amin'ny fampiharana toy ny hoditra, palitao, T-shirts, sy corduroy fitafiany, ary manana sakany hoe azo ampiharina eo isan-karazany sy ny fitafiana lamba fitaovana. 2D / 3D famoronana sokitra vokany sarobidy Manatsara ny toerana malalaka ny vokatra.
Laser Washing sokitra System
IZAO manasa sokitra tamin'ny laser rafitra manokana HANANA NY Jeans SY DENIM AKANJONY sokitra.
Denim tamin'ny laser manasa sy sokitra rafitra, ny miasa foto-kevitra dia ny mampiasa ordinatera hanao ny mari, firafitry, ary hanao PLT na BMP antontan-taratasy, ary avy eo mampiasa CO2 tamin'ny laser sokitra milina mba ho tamin'ny laser andry avo hafanana etching eny ambonin'ny fitafiana lamba araka ny solosaina toromarika . Ny kofehy iharan'ny etching hafanana avo dia ablated, ny loko dia levon'ny, ary samy hafa ny etching lalina no namorona ny ho lasa modely na manasa hafa vokany. Ireo lamina Azo voaravaka amboradara, sequins, ironing, ary vy Accessories mba hanatsarana ny kanto vokany.
Bebe kokoa momba io vokatra
Professional rindrambaiko, mora ny miasa, mora ny niova fo sary amin'ny fotoana rehetra.